Fararano ao Kyoto, Midika fa Vanim-potoanan’ny “Ravina Mikasaotsaoka” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2016 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, বাংলা, русский, Nederlands, bahasa Indonesia, Ελληνικά, Español, اردو, Italiano, English
Fanàlan'ny alina ao Arashiyama, Kyoto (日本京都-嵐山夜燈) avy amin'i Keiko Shih mpampiasa Flickr
Isaky ny fararano, velombolo miaraka amin'ny koyo (紅葉) ny tsirairay amin'ny tehezan'ny havoana ao Japàna, na ny ravin'ny fararano. Fombandrazana efa naharitra ela tao Japàna ny “Ravina mikasaotsaoka” rehefa fararano — ka nahatonga ny Fikambanana Nasionaly miadidy ny Fizahantany ao Japàna (JNTO) hamoaka “taridàlana iray momba ireo ravina rehefa fararano,” hanazavàna ny tena toerana sy ny fotoana ahitàna ravina tsara indrindra mahasondriana amin'ny toerana rehetra ao Japàna.
Arashiyama, any amin'ny sisiny andrefan'i Kyoto, no heverina fa iray amin'ireo toerana tsy tokony holalovana fotsiny ao Japàna raha resaka ravina rehefa fararano. Maro ireo olona avy any ivelan'i Kyoto na avy any ivelan'i Japàna no hahafantatra avy hatrany ireo ala-nà bararatabe ao Sagano, Arashiyama.
“Mackerel sky” rehefa fararano.
Raha hijery sary maro momba ny fararano ao Kyoto sy Arashiyama, araho ny tenifototra #京都 sy #嵐山 ao amin'ny Instagram.